Ntuziaka Blog: Catalyze, A Social Network for Development Software and Usability Experts | Martech Zone
Ntuziaka Blog: Catalyze, A Social Network for Development Software and Usability Experts
Sunday, October 21, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Oteela aka kemgbe m tinye blog na m na-echetara nke na a di na nwunye nke izu gara aga site Tom Humbarger nke Kataliki. Mgbanwe ọrụ na nkwekọrịta nkwekọrịta na-ebelata oge m nwere ike iji na saịtị m kwa ụbọchị. Obi dị m ụtọ, nke ahụ amalite ịtụgharị ugbu a.
Nke mbu, ufodu nzaghachi na ntinye akwukwo mbu
Enwetara m okwu site n'aka André na Lendo.org na mgbanwe m kwadoro maka saịtị ya rụpụtara ụfọdụ mmụba dị ịtụnanya na ndị ọbịa na nlele peeji. André nwere ihe dị ka ndị ọbịa 290 pụrụ iche kwa ụbọchị yana ihe ngosi 700 peeji tupu mgbanwe ndị ahụ. Ugbu a, Lendo.org nwere 1200 ndị ọbịa pụrụ iche kwa ụbọchị, yana ihe nlere anya peeji 3000!!!
Taa, m ga-atụnye aka Catalyze - Otu Obodo maka Ndị Na-enyocha Ahịa na Ndị Ọkachamara UX - Ndi mmadu na-echeputa ihe ngwanrọ. Catalyze gafere blog, ọ bụ ezigbo netwọkụ mmekọrịta yabụ nke a ga-abụ ihe ịma aka! Tom ping m izu ole na ole gara aga ma jiri ndidi na-eche!
Might nwere ike ịchị ọchị na nke a, mana ejiri m eziokwu gwuo ala iji chọpụta ihe "UX" pụtara! Amaghị m na ọ bụ ndebiri maka Ahụmịhe Onye Ọrụ. Amaghị m na ndị folks na-achọ “UX”… ị nwere ike ịdepụta “Ahụmịhe Onye Ọrụ” na aha peeji, wdg. N'ime peeji ahụ, ị ​​nwere ike iji> acronym> tags: UX nke mere na engines na-enyocha ihe ma okwu ahụ ma na nkenke ya.
Ọ ga-abụ ihe ịma aka, mana m ga-agba gị ume ka ị nye njikọ njikọta na ibe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụlite ndepụta zuru ezu nke akwụkwọ ọhụrụ, mkparịta ụka ọhụụ ọhụụ, yana ikekwe mmemme ọhụụ - nke ahụ ga-enye ndị na-agụ nnukwu uru.
Na otu ederede ahụ, achọpụtara m na m nwere ike ịnweta ndepụta RSS site na blọọgụ gị mana anaghị etinye ya na nkụnye eji isi mee gị maka mbanye na ihe nchọgharị. Niile nke ihe nchọgharị kachasị ọhụrụ ga-achọ ntinye aha njikọ RSS na nkụnye eji isi mee nke ibe gị ma ha ga-egosipụta bọtịnụ ndenye RSS na akpaghị aka na Ogwe Adreesị. Nke a bụ ihe koodu ahụ dị ka:
Nke a bụ otu o si ele anya mgbe ị gara na ibe m na Firefox:
Nke a bụ ihe ibe gị yiri:
Ọ bụrụ na ị mee ka ọ dị mfe maka ndị mmadụ ịdenye aha na saịtị gị, ị ga-enweta ọtụtụ ndị debanyere aha. Jide n'aka na ị na-eji ngwá ọrụ dị ka Feedpress iji nyochaa ole ndị debanyere aha ị nwere.
If I was a Google Bot scraping your blog page, M ga ndeksi gá »‹ na peeji dá »‹ ka “Blog thumbarger”… eleghá »‹ anya bá »not ghá» ‹Keywords á» ‹na-achá Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbanwe aha ibe gị na aha nke ibe ahụ, in ikpe a: I bu onye che echiche? Wepu Amamihe nke Ugbu a site n'aka Tom Humbarger
Nchọgharị ọchụchọ na-a attentiona ntị na etu esi arụ ọdịnaya na ibe gị. N'ihe banyere blọọgụ gị, aha nke post bụ naanị njikọ na klas = ”siblog_PostTitle”. Nke ahụ agaghị agwa Engine Search na enwere ihe ọ bụla dị mkpa gbasara Aha ahụ. Y’oburu n’inwe ike banye na ngwo ngho nke ngwa gi, agam achoputa na m nwere mkpado tag, ma> h1> ma obu> h2> nkpado nke n’etinye aha blog. M ga-akwado ịde ederede site na iji mkpado ederede.
Ikekwe ibe nke nwere ọtụtụ ohere bụ ihu akwụkwọ mbụ gị. Nke a bụ naanị otu nnukwu peeji nke njikọ mgbe achọpụtara ya na Nchọgharị Nchọgharị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihu akwụkwọ etinyere na isi okwu na ihe ederede ka akpado ya, ị ga-enwe ike ịdepụta ọdịnaya ahụ nke ọma.
Na gị kalenda peeji nke enwere njikọ Idenye aha .. mana ọ nweghị ihe dị na njikọ ahụ ịdenye aha. M ga - ahụkwa na ị na - egosipụta aha peeji dịka m dere banyere aha blog.
M na-egwu ala n'ime ihe owuwu peeji gị, ahụrụ m nnukwu tebụl na div. Achoghi m igba ogbugba na ndi ozo .NET mmepe, mana a na m ahu nke a oge obula. Ezigbo onye nrụpụta NET ga-enwe oge isi ike ịchọpụta ihe mmewere, yabụ wụpụ ya okpokoro gburugburu ka ọ dịrị ya mfe.
Tebụl dị maka data, divs na ihe eji eme akwa bụ maka ọdịnaya.
Chee echiche banyere ya - mee ka à ga - asị na ị bụ onye na - achọ ihe na - achọ ihe, ị na - achọ ‘ịhụ’ ihe ọdịnaya dị na peeji ahụ bara uru maka ntinye. Crawlers na-ewere nkebi nke ibe… ọ dịghị onye maara n'ezie pasent, mana ha anaghị ewere peeji niile. Ngwa gị nwere koodu nhazi nke ukwuu na ọ siri ike ịchọta ọdịnaya ahụ! Na oge ị na-eme, ọ dị ọkara na ibe. Styledị a dịkarịsịrị na mmepe NET. Ọ na-eme ka ngwa ahụ dị mfe ide, mana ọ na-esiri ndị na-akpụ akpụ ike ịgụ. Ọ bụrụ na enwere ụzọ ị ga-esi nye nzaghachi na sistemụ Njikwa Ọdịnaya gị, biko mee ka ha mata.
Achọrọ m n'ezie iwere elu na "Kwadoro site na iRise" iji chọpụta ozi ndị ọzọ mana ọ jikọtara na peeji oghere.
Ikwenyesi ike na mkpado Meta maka isiokwu na nkọwapụta na ibe ahụ. N’ụzọ na-emegide onwe ya, ọtụtụ injin nchọ na-etinyeghị uche na ndị a, mana ha enweghị ike imerụ ahụ. Nkọwapụta meta gị chọrọ ọrụ ụfọdụ, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na m hụrụ ka kalenda gị na-apụta dị ka ihe si na ya pụta, nkọwa ga-abịa dị ka "Catalyze | Ihe omume ”. Amaghị m na ị ga - enweta ọtụtụ folks na ịpị na nke ahụ! Kama, M ga-ahu nagide gị na paragraf mbụ, “The Catalyze omume kalenda bụ a saa mbara isi iyi nke niile eme? obodo ma o bu nke obodo? ndị ahụ nwere mmasị na ndị nyocha azụmahịa na ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ. ”
Enweghị faịlụ robots.txt dị na ndekọ mgbọrọgwụ gị. Faịlụ Robots.txt ka bots Nchọpụta Nchọpụta mara otú ịchọrọ saịtị gị. Nwere ike ịchọta ụda ozi na Robots.txt na nke a FAQ page.
Enweghị faịlụ saịtịmap.xml na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ gị na enweghị faịlụ Robots.txt iji tụọ ebe ọ dị. Igodo nke iji mee ka injin nchọta ihe na saịtị gị dị nro na-eme ka ọ dị mfe nchọnchọ iji wepụta saịtị gị wee chọpụta ebe ihe dị. Mapmap bu uzo ihe omume gi na saịtị gi. Ma ọ bụghị ya, Englọ Ọrụ Nchọgharị nwere ike ịpịchaa saịtị ahụ site na njikọ… n'amaghị ihe dị mkpa ma ọ bụ otu esi ahazi saịtị ahụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe kachasị mkpa ị ga - eme maka saịtị gị! Gụọ ihe na Sitemaps.org
M na-eche na nke ikpeazụ a, mana enyere enweghị ngwongwo ngwugwu a na-akwụ ụgwọ na Catalyze, saịtị gị nwere ike ọ gaghị pinging Google Blogsearch na isi Enjin ọchụchọ mgbe saịtị gị gbanwere ma ọ bụ blọọgụ blog mere. Ọzọkwa, ọ bụghị na a gaghị achọpụta saịtị gị, mana ị ga-agwa ndị ọrụ nọ na ntanetị ụfụ agaghị emerụ gị ahụ.
Nwere otu ebe nke saịtị, Tom, mana ọ nweghị onye maara na ọ dị n'ihi enweghị njikarịcha Ngini Nchọpụta ọ bụla. Lelee SEODigger na saịtị gị naanị ị gbagote maka "Catalyze". A na-ere ọdịnaya niile ahụ belụsọ na ịnwere ike ịnweta saịtị Enjin Enginentanetị enyi na enyi. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara "Catalyze" bụ isiokwu gị, lee anya na a agbara ọchụchọ na saịtị gị ma ị ga-ahụ ihe kpatara ya.
Kasị mma! Ekwenyeghi m ma ọ bụrụ na inwee mmepe iji me mgbanwe ma ọ bụ na ị ga-arụ ọrụ site na ụlọ ọrụ mepụtara ngwa ahụ, mana enwere obere ọrụ ị ga-arụ.
Tags: ntinye ederedendụmọdụ blogkpalie
Kedu ka Usoro Ọrụ si akwadebe m maka Mmemme
Ọkt 23, 2007 na 9:49 AM
Ee! Ndụmọdụ ahụ bụ nnukwu ọganihu na blọọgụ m. Ugbu a, m na-agba mbọ iru 2000 uniques kwa ụbọchị.
Ezi ọrụ Douglas!